Kooxda Sawirada Soo Saarayaasha Sony Sawirrada Kooxda Sawirada Waxay u Saaraysaa Kulankeeda "Jumanji: Heerka xiga" | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE
Home » Featured » Kooxda Sawirada Adeegga Soo Saaraha ee Sony Sawirrada Kooxahan Ayaa Soo Bandhigay Ciyaartooda "Jumanji: Heerka Ku Xiga"
Kevin Hart, Dwayne Johnson, Karen Gillan iyo Jack Black
Sawirka Columbia ' Jumanji: Heerka Xiga, baandada laga soo qaaday 2017, Jumanji: Ku soo dhowow jungle, wuu soo laabtay laakiin ciyaartii waa ay isbadashay. Markii ay ku soo noqdaan Jumanji si ay u badbaadiyaan mid iyaga u gaar ah, waxay ogaadaan in wax aan ahayn sidii ay filayeen. Ciyaartoyda waa inay geesinimo u sameeyaan qaybo aan la garan oo aan la qarxin, laga bilaabo lamadegaanka qalalan ilaa buuraha barafka leh, si ay uga baxsadaan ciyaarta ugu halista badan adduunka. Filimkan, oo jidka u galay tiyaatarada Waqooyiga Ameerika markay ahayd Disembar 13, 2019, wuxuu ururiyay $ 600 milyan xafiiska sanduuqa adduunka.
Sidoo kale astaan ​​u noqoshada ka soo laabashada waa kooxdii laga keenay Sony Sawirro Soosaarista Adeegyada Wax Soo Saarka oo abuuray sanqarta filim hore. Waxaa hogaamiya Kormeeraha Sanadlaha Tafaftiraha / Re-Recording Mixer Julian Slater, Kormeeraha Sahanka Tifaftirayaasha Joel Shryack iyo Re-Recording Mixer Kevin O'Connell, kooxdu sidoo kale waxay ahayd inay kor u qaadaan ciyaartooydooda, iyagoo raadinaya dhawaaqyo badan oo mala-awaal ah si ay u taageeraan dhacdooyinka xiisaha leh ee filimka. , aragtida indhaha ee muuqaalka leh, meelaha cajiibka ah iyo qalloocinta shirqoolka la yaab leh.
Slater wuxuu yiri: “Dhinac ahaan waxaan ku bilownay bilow, maxaa yeelay horey ayaan u wada shaqeyn jirnay, waana u naqaanay dunida Jumanji, jilayaasha, iyo qaabka shaneemada Jake Kasdan,” ayuu yiri Slater. Laakiin kani waa filim aad u weyn! Waxaa jira muuqaallo ficil ah oo intaa ka badan muuqaalladaasna waa kuwo aad u ballaaran. Marka, wax waliba waa inay sii weynaadaan oo ay dhiirrigeliyaan, oo loo dhiibaa qaab farxad iyo rayn rayn u leh dhagaystayaasha.
Sida filimkii hore, iskuxirka adduunka ee Jumanji wuxuu soo bandhigay caqabado u gaar ah kooxda codka. Marka ciyaartoygu soo galaan ciyaarta, waxaa lagu dhex geliyaa jawi ay waxkasta oo ku hareeraysan ay yihiin kuwa aan macquul ahayn, haddana waxay u muuqataa wax dhab ah. Waxay yihiin avatars adduunyo khayaali ah, laakiin dunidan ma ahan kartuun kartoon, ayay tidhi Shryack. Waxyaabaha ayaa dhab ah, laakiin wax walba waa la kordhiyay. Waxay la kulmaan wax u eg xayawaan dhab ah, laakiin xayawaanadaasi waa kuwa nolosha ka weyn oo waxaay u dhaqmaan siyaabo aan la fileynin oo had iyo jeer khatar galinaya. ”
Tusaalaha ugu weyn ee sida dhabta ah ee kor loogu qaadaa waxaa lagu muujiyaa sanqad waa goob ay kujiraan tiro badan oo ah manjo. Geesiyaasha filimka ayaa waxaa ku raad jooga boqolaal xayawaan ah oo caashaqsan oo ka dhexdhacaya buundooyin xiisa badan oo buundooyin xarig ah, isla markaana noloshooda ku baxsada. Codku wuxuu ciyaaray door muhiim ah labadaba keenida CG-animated raligaging mandur ሕይወት iyo in lagu daro xiisadda maadaama jilayaasha aadanaha ay maraan shabakadda khatarta leh ee buundooyinka. "Abuuritaanka kun xirmooyin kiniiniyaal ah aad bay u adag tahay in la sameeyo," ayuu yidhi Slater. “Waa taxane dheer oo haddii dhawaaqa xayawaannadaasi ay aad u dhawaaqaan, waxay noqon kartaa mid dhib badan oo dhib badan. Dhanka kale, waxaad ubaahantahay inaad ka dhigto mid xiisa leh oo aad dhisid xoojiso. ”
Dwayne Johnson iyo Kevin Hart xiddigee Jumanji: Heerka xiga
Awoodda u-yeelashadda 'mandrills' iyo cod-siinta kale waxaa lagu abuuray isku-darista duubitaannada aasaaska-dunida dhabta ah iyo dhawaaqyada xayawaanka ee uu soo saaray jilaa cod. Qaybahaas, tifaftirayaasha dhawaaqa waxay u sameeyeen “luuqad” caan ah xayawaannada. "Waxaan u baahanahay noocyo fara badan oo qaylo iyo qaylo badan maxaa yeelay dhaqankooda ayaa ka sii care badan kan aad ka heleyso duurka," ayay tiri Shryack. "Isku soo wada duuboo, sixiroole kasta iyo qaylada waxaa gacanta lagu hayaa."
“Waxaan dooneynay inaan siinno shaqsi kasta oo shucuureed iyo shucuureed,” ayuu raaciyay Michael. "Waxaan sidoo kale u baahanahay inaan taageerno mareegaha sheekada annagoo xoojinayna dhaqankooda, ha ahaato weerar, bood ama ka soo dhacaya buundo."
Sida mandrills, jaranjarooyinka xargaha waxay ahaayeen abuurisyo CG. Natiijo ahaan, dhawaqyadooda la xiriira - wareejinta xadhkaha, ruugitaanka iyo jebinta qoryaha - ayaa lagu darayaa boostada. "Waa goob aad u adag," ayuu yidhi Shryack. Wax badan ayaa dhacaya iyadoo jilayaashu ay la kulmayaan dhowr seegay. Hal dhibic, Karen Gillan waa laga soocaa kooxda inteeda kale, iyada oo isku dayeysay in ay garato waxa la sameeyo, waxaa gadaal ka soo weerara koronto xoog leh. Codadka dhaqdhaqaaqa jirkeeda, mandrill-ka iyo buundada waa in lagu daraa oo la abaabulo si loo abuuro dareenka wicitaan dhow.
Dhawaqa Foley waxaa si balaaran loogu adeegsaday sanca iyo runta. Hecker ayaa yidhi, "Waxaan samaynay dhammaan tallaabooyinka jilayaasha, markay ordayaan, boodaan oo ka boodaan buundada ilaa buundada," ayuu xusay Hecker. Waxaan sameynay dabeecad kasta si gooni gooni ah, sidaa darteed kuwa wax isku daraa waxay maamuli jireen waxqabadka. Waxaan sidoo kale sameynay waxyaabo ay ka mid yihiin gacan qabashada iyo meydadka oo dhaca. Waxay ahayd wax aad u adag in la sameeyo maxaa yeelay jilayaasha ayaa ordaya oo boodaya, buundooyinkuna way kala baxayaan. Guddiyada ayaa jebiya iyo xadhkaha isku xidha buundooyinka. Waxay ahayd inaan la imaano dhamaan dhawaaqyadaas si aan uga caawino goobta inay noolaato oo abuurto dareenka halista. ”
Kooxda codka ayaa geeyay nooc isku mid ah xaqiiqada iyo male-awaal goobtii hore ee filimka markii geesiyaasha lagu qasbay inay ka cararaan xayawaan aad u weyn oo lugo-lugood ah. Sida mandrills, shimbiraha duulimaadka ah way ka weyn yihiin oo ka khatar badan yihiin dhiggooda dunida dhabta ah. McGill wuxuu yidhi: "Waa wax lagu farxo in laga shaqeeyo adduunka Jumanji oo ay wax waluba dhab yihiin laakiin la buunbuuniyey hab madadaalo," ayuu yidhi McGill. Waxaan dhagaysannay duubitaano badan oo ah oraha, laakiin shimbiraha dhabta ah cod badan kama sameeyaan, ugu yaraan ma aheyn waxa sheekadu u baahan tahay. Marka, waxaan isticmaalnay barootiyo iyo xayawaanno waxaanan u dejinnay si aan uga dhigno inay ku habboon yihiin xayawaanno waaween. Waxaan ku soo gabagabownay xayawaanno waa weyn oo carrab la 'oo iyagu, iyagu noqdeen kuwa waalan, oo codkooda sii kordhaya.
Geesiyayaashu waxay ka hareen shimbiraha iyagoo ku dhex jira laba nooc oo cayayaan dillaac leh. Si ka yar cad marka loo eego shimbiraha, dhawaqa gawaaridaas ayaa sidoo kale loo xoojiyay saameyn la yaab leh. Waxaan sameynay duubis asli ah oo ka hadlaya dhacdooyinka dhabta ah ee dunnida, laakiin ma aysan keenin dareen sax ah oo deg deg ah ama khatar ah, ayuu yidhi Slater. "Marka, waxaan iyaga ku xoojinay dhawaaqyada matoorrada gawaarida V8 iyo gawaarida orodka."
“Qalabka mashiinkooda wuxuu soo nooleeyaa waxyar oo aad u yar iyo in yar oo ka sii dheer sidii ay dhab ahaantii sameeyeen,” ayuu ku raacsan yahay Michael. - Laakiin si qallafsan ayay u shaqaysaa sidaa darteed ma horseedayso gaalnimo. Dhagaystayaasha goobta ayay ku maqnaayeen, runtii ma dareemaan dhawaqa, laakiin waxay ku sii jiidayaan Jumanji. ”
Mar labaad, shaqaalaha Foley waxay sameeyeen door muhiim ah, iyaga oo abuuraya dhawaqa cagaha gogosha ku socda ciidda una isticmaalaya tuubooyin waaweyn oo baalal si ay u ekaadaan dhaqdhaqaaqa baalasheega shimbiraha. “Hal shimbirood ayaa weeraraya cayayaan-dilaha dunidda ah Dwayne Johnson iyo Kevin Hart ayaa fuushan, waxayna bilaabeen godad saqafka sare ah,” ayuu raaciyay Hecker. Waxaan u isticmaalnay aalado iyo go'yaal bir ah si aan u abuurno dhawaqyadaas calaacalka oo waxaan ku darnay muuqaalka shimbiraha madaama ay iskudayayaan inay birta ka jabiso. ”
Kevin Hart iyo Jack Black star ee Jumanji: Heerka xiga
Qaylada dhawaaqa ayaa waxaa ku qasbay Slater iyo O'Connell gudaha Dolby Atmos in Sony Tiyaatarka Sawirada 'The Studios Studios' Taariikhda Cary Grant Theater. Dhexgalka filimka waxay ahayd geedi socod cajiib ah, ayuu yidhi O'Connell. "Waxaan helnay waxyaabo naqshad cajiib ah leh oo ay weheliso dhibco cajiib ah oo ka yimid Henry Jackman, wayna is dhameystireen si wanaagsan.
Slater wuxuu aaminsan yahay in taageerayaasha filimka ay heli doonaan Jumanji: Heerka Xiga qof kabadan oo mudan in la doorto kii ka horeeyey. Waa filim aad u wanaagsan, ayuu yidhi. Sheekadu waxaa ka buuxa qalloocnaan xariif ah oo dhisi kara madadaalo filimkii u dambeeyay oo ku riixaya boos cusub. Taasi waxay dhiirrigelisay kooxdeena dhawaaqa inay sidaas oo kale sameeyaan. Anaga oo sharfaya qaar badan oo ka mid ah dhawaaqyada mowqifka ah ee aan u abuurnay filimkii ugu horreeyay, waxaan dheelitirnay ciyaartan waxaanan ku riixnay jihada cusub. ”
KU SAABSAN JUMANJI: HEES CUSUB
Waxaa haga Jake Kasdan. Waxa Qoray Jake Kasdan & Jeff Pinkner & Scott Rosenberg. Iyada oo ku saleysan buugga Jumanji oo uu qoray Chris Van Allsburg. Waxaa soo saaray Matt Tolmach, Jake Kasdan, Dwayne Johnson, Dany Garcia iyo Hiram Garcia. Soosaarayaasha Fulinta waa David Householter, Melvin Mar, Scott Rosenberg, Jeff Pinkner, William Teitler, Ted Field iyo Mike Weber. Xiddigaha filimka Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, Awkwafina, Alex Wolff, Morgan Turner, Ser'Darius Blain, Madison Iseman, oo ay wehliyaan Danny Glover iyo Danny DeVito.
KU SAABSAN Sony FARSAMADA FARSAMADA
Sony Pictures Entertainment (SPE) waa hay'ad hoos taga Tokyo Sony Shirkadda. Hawlaha caalamiga ah ee SPE waxay ka kooban tahay soo saarista sawirrada, helitaanka, iyo qaybinta; wax soo saarka teleefishinka, soo iibsiga, iyo qaybinta; shabakadaha telefishinka; abaabulidda naqshad digital ah iyo qaybin; hawlgalka qalabka studio; iyo horumarinta qalabka cusub ee madadaalada, adeegyada iyo tiknoolajiyada. Ururada wax soo saarka ee SPE ee Manhajka Sawirka waxaa ka mid ah Columbia Pictures, Screen Gems, TriStar Pictures, Sony Sawirrada Muuqaalka, Heerka 6 Films, AFFIRM Films, iyo Sony Sawirada "Classics". Macluumaad dheeraad ah, booqo www.sonypictures.com/corp/divisions.html.
Adeegyada Wax Soo Saarka ee Sony Sawiro Waxay Soo Bandhigayaan Cod Cod Dhegeed Oo Ay Kuxiran Yihiin Waxqabad Iyo Qosol "Wiilal Xun Oo Nolosha Ah" - January 27, 2020
Alchemy Post Sound wuxuu bixiyaa Foley sagaal Filim Filim - January 27, 2020
Mark Lanza waxaa loo doortay Madaxweynaha Tifaftirayaasha Motion Picture Motion Picture (MPSE) - January 27, 2020
Udoodar Ololaha Caafimaadka Aurora / Colonie Warbaahinta-Warbaahinta Warbaahinta-SocialMedia Broadcast-SocialMeida Caaqilada Cobalt Kaalinta Graham Chapman Prmoted toEditor Jumanji wax soo saarka post SJGolden - dhawaajiyaan Spears & Fiilooyinka COLONIE / Chicago TV Technology	2020-01-13
Previous: Blackmagic URSA Mini Pro On Dalxiis Iyadoo Yar oo Isku Duban
Next: NUGEN Audio Unveils Cusbooneysiinta Qalabka Software ee SEQ-S ee NAMM 2020